पुरानै कथावस्तुमा नयाँपन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पुरानै कथावस्तुमा नयाँपन
२०७१ श्रावण २६, सोमबार ०५:०२ गते
नेपाली समाज २१औँ शताब्दीमा चलिरहेको छ । तर पनि हालसम्म नेपाली समाजमा अन्धविश्वास तथा रुढीवादी परम्परा कायम नै रहेको छ । जस्तै, कोठीबाट फर्किएका चेलीलाई स्नेह र माया दिई अवसर प्रदान गर्नुको सट्टा छिःछिः र दूर–दूरको व्यवहार अझै कायम नै
‘हो, म त्यो अभिषेकलाई छोड्दिनँ । म मरेर भए पनि त्यसलाई मार्छु बाबु !’ यो भारतमा बेचिएका चेलीहरुद्वारा प्रतिनिधित्व गरी बोलिएका संवाद हो । यसमा नारी चीत्कार छ । रिसको बाढी उर्लेर आएको छ र आफूलाई नारकीय दलदलमा फसाउने दलालहरुसँगको प्रतिशोधको भावना हो ।
यस्तै–यस्तै कथावस्तुमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अभिनीत चलचित्र ‘कोहिनुर’ रहेको छ, जसमा कोहिनुरको भूमिकामा स्वेता खड्का रहेकी छिन् । यही साउन २३ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले सम्पूर्ण बेचिएका चेलीहरुको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यस चलचित्रले देश बिगार्न र चेलीहरुलाई दलदलमा फसाउन माथिल्लो निकायदेखि तल्लो स्तरसम्मको हात रहने कुरालाई छर्लङ्ग पार्न खोजेको छ ।
यसको न्यूनीकरणका लागि जताततै सचेत हुनुपर्दछ । जनताले चाहेमा कोहीले केही गर्न सक्दैन । जनताको शक्तिका अगाडि कसैको केही लाग्दैन । जनताले चाहेमा एक दिनमै उथलपुथल पार्न सक्दछन् ।
आकाश अधिकारीको कथा र निर्देशन रहेको यस चलचित्र इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिर नारायणगढमा चलिरहेको छ । अधिकारीले यसअगाडि ‘पन्छी’ र ‘काठमाण्डु’ जस्ता सफल चलचित्र बनाएका छन् । यस चलचित्रका आधाजस्तो छायांकन भारतमा गरिएका छन् । भारतमा रहेका कोठीहरु र त्यहाँको मौलिक संवादलाई टपक्क चलचित्रमा उतार्ने प्रयासलाई मान्नैपर्दछ । नेपाली चलचित्रमा ४५ मिनेटजति हिन्दी भाषालाई चलचित्रमा उतारेर जोखिम मोलेका छन् । तर पनि खरो रुपमा आफूलाई उतार्न सफल भएका छन् ।
चलचित्रमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र स्वेता खड्काको अभिनय दमदार रहेको छ । चलचित्रमा समाहित ‘सलाम किजिए’ र ‘तिमी मेरो होइन र’ गीत सम्झन लायक रहेका छन् । एउटा वेश्या र नर्तकीको भूमिकामा देखिएकी स्वेता खड्काको करियर उठाउन यस चलचित्र मह¤वपूर्ण हुन सक्दछ । चलचित्रमा सम्राट सापकोटा, मुकुन्द श्रेष्ठ राम्ररी जम्न सकेका छन् ।
कथावस्तु सामान्य परिवारमा हुर्किएको अभिषेक खरेल उर्फ बाबु (श्रीकृष्ण श्रेष्ठ) अन्याय र अत्याचार सहन नसक्ने हुन्छ । एउटा मोस्ट वान्टेड गुन्डालाई समातेर प्रहरीलाई बुझाएपछि उसलाई मन्त्रीले एउटा म्यानपावरको प्रबन्ध निर्देशक बनाइदिन्छ ।
तर, त्यो म्यानपावरले विदेश पठाउने भन्दै केटीहरुलाई बम्बईको कोठीमा लगेर बेचेको कुरा अभिषेकलाई थाहा हुँदैन । एक पटक अभिषेक केटी लिएर बम्बई जान्छ र दलालको हातमा सुम्पन्छ, तर उसलाई ती केटीहरु बेचिएको थाहा हुँदैन । त्यहाँ उसको मित्रता एक भारतीयसँग हुन्छ, जसले अभिषेकलाई कोठीमा लैजान्छ । जहाँ अभिष्ोकको भेट कोहिनुर (स्वेता खड्का) सँग हुन्छ ।
चिनजानपछि अभिषेकले कोहिनुरलाई कसले बेच्यो र कसरी आइपुग्यौ भन्दा अभिषेकले विदेश जाने भनेर कोठीमा बेचेको बताउँछिन्, जुन अभिषेक कोहिनुरकै अगाडि हुन्छ । अभिषेकले कोहिनुरलाई कोठीबाट भगाउँछ र नेपाल पठाउँछ । अनि, बाँकी कोठीमा बेचिएका नेपाली केटीहरुको पनि उद्धार गर्दछ । केटी बेचेको अभियोगमा नेपाल र भारतमा अभिषेकको खोजी हुन्छ । जो व्यक्तिले अभिषेकलाई कोठीमा पु¥याएको हुन्छ, ऊ भारतीय प्रहरीको एसएसपी हुन्छ र उसले अभिषेकलाई सहयोग पु¥याउने वाचा गर्दछ अनि अभिषेकलाई नेपाल पठाउँछ ।
त्यसपछि के होला त ? अभिषेकलाई के कोहिनुरले सजाय दिन्छिन् त ? नेपाल प्रहरीले अभिषेकलाई कस्तो कारवाही
गर्ला ? अभिषेकले आफू निर्दोष रहेको कसरी सावित गर्ला त ? यी सबैको जड बुझ्न इन्द्रदेव चलचित्र भवनसम्म पुग्नैपर्दछ ।
राम्रो पक्ष ः चलचित्रमा समावेश दृश्य र संवाद राम्रा रहेका छन् । कथावस्तु पुरानै भए पनि नयाँ ढाँचामा देखाइएको छ । गीत–संगीत राम्रा रहेका छन् । भारतमा खिचिएका कोठीका दृश्य हुबहु नै लाग्दछन् ।
नराम्रो पक्ष ः चलचित्रका पटकथाहरु कमजोर छन् । अभिषेकलाई कसरी फसाइयो भन्ने कुराको तथ्य नै छैन । भारतमा भेटिएका व्यक्ति कसरी अभिषेकको सम्पर्कमा आए, त्यसको खुलासा भएको छैन । चलचित्र सरर बगेर अन्तमा धर्मराउनुले खल्लो बनाउन सक्दछ ।
निष्कर्ष ः पुरानै कथावस्तु भएता पनि ‘कोहिनुर’ले अझै पनि चेलीबेटी बेचबिखन कायम नै छ भन्ने कुरालाई दर्शाउन खोजेको छ । विभिन्न बहानामा चेलीहरु धमाधम बाहिरिरहेका छन्, जसमा उच्च निकायदेखि तल्लो स्तरसम्मका कर्मचारीको हात रहेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले चाँडै ध्यान पु¥याउन जरूरी छ भन्ने कुराको सन्देश चलचित्रमा पाइन्छ ।